Shaqaalaha Wasaaradda Ganacsiga Ee Ka Hawlgala Kastamadda Oo Walaac Ka Muujiyay Shaqadoodii Ay Ka Maroorsatay Wasaaradda Maaliyaddu
Shaqaalaha Wasaaradda Ganacsiga Ee Ka Hawlgala Kastamadda Oo Walaac Ka Muujiyay Shaqadoodii Ay Ka Maroorsatay Wasaaradda Maaliyaddu 0 August 04, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 813
Shaqaalaha Wasaaradda Ganacsiga Ee Ka Hawlgala Kastamadda Oo Walaac Ka Muujiyay Shaqadoodii Ay Ka Maroorsatay Wasaaradda Maaliyaddu Shqaalaha
wasaaradda ganacsiga Somaliland ee ka hawl gala xarumaha
dakhli-soo-saarka dalka ayaa la sheegay in ay shaqadoodii ka maroorsatay
shaqaalaha wasaaradda Maaliyadda ee ay wada joogaan goobahaasi. Waxaanay
yihiin kuwo magac u yaal ah.
Wax masaariif ahna ma
qaataan mudooyinkan u danbeeyay sida ay no cadeeyeen qaar ka mid ah
shaqaalahaasi wasaaradda Ganacsiga ee jooga xarumaha kastmadda dalka gaar
ahaana goboladda galbeedka oo aanu la sheekaysanay.
Baastadii aanu suuqa ka cunay ayaa na loo haystaa, oo wax aanu isaga
bixino ma hayno. Xaasaskii iyo carruurihiina way na sugayaan” sidaasi waxaa
yidhi mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ganacsiga ee ka hawl gala kastamka
magaaladda Wajaale, kaasi oo ka cudur-daartay in magaciisa la xuso.
Arrintani ku habsatay
shaqaalaha wasaaradda ganacsiga oo aanu u kuur-galnay ayaa waxa noo
xaqiijiyay dhibaatadda haysta shaqaalaha ka shaqeeya meelaha
dakhli soo saarka ama kastmadda sida Abaarso, Kalabaydh, Wajaale, Boorama,
Saylac iyo meelo kale, kuwaasi oo noo xaqiijiyay in arrintani masaariif
la’aantu ay tahay mid iyaga oo qudha ku kooban.
ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee iyagu goobahaasi la joogaa ay qaataan
lacag gaadhaysa inta u dhaxaysa 70,000 shilling ilaa 100,000 shilling,
dhibaatadaasi oo ay ku sababeeyeen in ay masuul ka yihiin maamul xumo ku
habsatay madaxda sare ee wasaaradda ganacsiga oo aan wax xil ah iska
saarin arrinta shaqaalaha, isla markaana aan waxba kala socon arrimahaasi.
Sidoo kale waxay noo
sheegeen shaqaalahan ka tirsan wasaaradda ganacsiga ee aanu la kulanay in aanay
jirin xafiisyo qalabaysan oo ay ku hawl galaan, isla markaana xafiisyadoodu ay
yihiin kuwo aanu oolin wax agab lagu shaqeeyo ah sida Kuraas, miisas iyo waxyaabaha
kale ee lagama maarmaanka u ah shaqadda.
Waxaanay noo xaqiijiyeen
in marka ay shaqo qabanayaan in ay kuraasta iyo miisaskaba ka soo qaataan
xafiisyadda wasaaradda maaliaydda ee ay isku shaqaddda yihiin kuwaasi oo iyaga
xafiisyadoodu ay yihiin kuwo si fiican u qalabaysan, iyadoo waxa keliya
ee xafiisyadda wasaaradda ganacsiga ee kastamadaasi waxa keliya ee yaallaa ay
yihiin buugaagta ay waraaqaha ka jarayaan iyo Shaabadda oo qudha.
ee jira xafiisyadda wasaaradda ganacsiga ee xarumaha dakhli soo saarka dalka
ayaa loo aanaynayaa in ay sabab u tahay masuuliyiinta sare ee wasaaradda
ganacsiga oo u muuqda kuwo ka gaabiyay shaqaddii ay qaranka uga masuulka ahayd,
isla markaana hawsha cashuur qabashadda ay gebi ahaanba si buuxda ula
wareegtay ugana maroorsatay wasaaradda maaliyaddu.
Iyadoo ay mudooyinkan
danbe soo ifbaxaysay arrintani la xidhiidha in wasaaradda ganacsigu ay lumisay
dhamaanba awoodihii iyo doorkii ay ku lahayd hubinta iyo qabashadda dakhliga
dalka soo gelaya, isla markaana ay taa bedelkeedda ay dhamaanba hawlihii cashuur
qabashada isku koobtay lana wareegtay wasaaradda maaliyadu, halka ay ahady in
ay wasaaradda ganacsigu hubiso cadadka lacagta ay wasaaradda maaliyadu ka
qaaday bagaashka ama maciishadda la cashuuray ee dalka dibadda ka soo gashay.
danbe si aad ah u soo baxayay cabashadda shaqaalaha wasaaradda ganacsiga ee
xarumaha dakhli qabashadda dalka ka hawl gala kuwaasi oo ay soo food saartay
dhibaato adag oo sababtay in ay gudan kari waayaan shaqadii ay qaranka uga
masuulka ahaayeen, kuwaasi oo hadda u muuqda haddii aan arrintani si deg deg ah
wax looga qaban in ay baneeyaan shaqadda ay hayaan.
Si kastaba ha
ahaatee cabashooyinkan ka soo yeedhaya shaqaalaha wasaaradda ganacsiga ee
xarumaha dakhli ururinta ayaa muujinaya in wasaaradda ganacsigu ay ku
fashilantay shaqadeedii, isla markaana ay tahay mid dayacday hawlihii ay
qaranka u qaabilsanayd. Maadaama oo ay tahli kari waayeen shaqaalaheedii
kastamadu in ay ogaadaan ama la socdaan cadadka dakhliga maalin
kasta soo gala wasaaradda maaliyadda.
muuqataa in waxyaabahan soo baxayaa ay weji-gabax ku yihiin shaqadii
ay qaban lahadyna ay wasaaradda maaliyadu kala wareegtay, una
muuqata mid aan waxba ka ogayn sharuucda dalka iyo awoodaha
uu u siiyay in ay si wada jir ah waraaqaha dakhli-qabashadda ee loo
jarro badeecadaha lagu cashuurro kastmadda.
Tell:0659118404 No Comments yet... Print
Name: Email: Website: Security Code: Comment: Social Media Related Items Daawo Madaxweynaha Oo Kulan Muhiima La qaatay Masuuliyiinta Hay'adda Shaqaalaha Dawlada iyo Go'aamadii laga Soo saaray + Sawiro
Xisbiga UCID Oo Ka Hadlay Amar Wasaaradda Waxbarashada Somaliland Ku Xidhay Jaamacadd Burco Ku Taala Iyo Xadhiga Lagu Kacay Siyaasiyiin Iyo Suxufiyiin Hargeysa Ku Xidhan
12/04/2017 - 18:14:13
War Xasaasi Ah:-Laba Ka Mid Ah Wasaaraddaha Xukumada Madaxwayne Siilaanyo Oo Khilaaf Xooga Ka Dhex Qarxay Waxa Sababey Iyo Halka Uu Salka Ku Hayo
10/04/2017 - 08:20:57
Halkan Ka Akhri Magaca Masuul Da'yar Oo Uu Wasiirka Ganacsiga Somaliland U Magacaabay Isuduha Gobolka Saaxil Ee Wasaarada Ganacsiga Iyo Reer Saaxil Oo Si Weyn U Soo Dhaweeyey........
02/04/2017 - 19:12:57
Murashaxa Madaxweynaha WADDANI iyo Weftigii uu Hoggaaminaayey oo Kulamo La Qaatay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dalka Austria iyo Hay'adda Mucaawinooyinka u Qaabilsan Dalkaasi+SAWIRO
01/04/2017 - 13:39:57
Halkan Ka Daawo Wasiirka Shaqada Iyo Arrimaha Bulshada Oo Ka Haddlay Waxa Uga Meel-yaala Shaqaalaha Ajaanibka Ah.
01/04/2017 - 13:04:33
Murashaxa Madaxweynaha WADDANI oo Kulamo La Qaatay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Baarlamaanka Dalka Jarmalka+SAWIRO
31/03/2017 - 14:07:54